ခြောက်သွေ့အသားအရေပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် skincare ပါဝင်ပစ္စည်း (၇)မျိုး
သားယောကျ်ားလေးတွေကို ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ?
သင့်ရဲ့ စကားပြောဆိုပုံက သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်းကို ဘာပြောနိုင်သလဲ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို respect ထားတဲ့အခါ ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အရာ (၁၅)ခု
နဖူးအရေးအကြောင်းလိုင်းတွေကို လျော့ပါးသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၄)ခု
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် မြန်မြန်အရွယ်ကျတတ်ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ?
သင့်ရဲ့မွေးလက သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ် ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိသလဲ?
ပိုမိုလွတ်လပ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသော ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိမ့်မယ့် မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (5)ချက်
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ခိုးယူခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ အချက် (၆)ချက်
ရိုင်းစိုင်းပြီးဆိုးသွမ်းတဲ့သူတွေ၊ ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုခု ကျူးလွန်တဲ့သူတွေပဲ ထောင်ကျတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့် တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ ရိုးရိုးသားသားနေထိုင်တဲ့ သာမန်လူတွေတောင်မှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ထောင်နန်းစံခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအတွက် ဗဟုသုတရဖွယ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁။ ဇွန်းတစ်ချောင်းကြောင့် ထောင်ကျခဲ့ရသူ။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာ ကားမောင်းနှင်နေရင်း ရဲတွေရဲ့ ရပ်တန့်စစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတော့ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် Huff တစ်ယောက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတွေက သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်အိတ်ထဲကနေ ဇွန်းတစ်ချောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဇွန်းက အီတလီခေါက်ဆွဲစားပြီးသားဇွန်းတစ်ချောင်းဖြစ်ပြီး Huff ကတော့ ဒီဇွန်းနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကို စနောက်ဖို့အတွက် သိမ်းထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတွေက ဒီဇွန်းပေါ်မှာ ကပ်ကျန်နေတဲ့ အရာတွေက မက်သာဖီတမင်းလို့ခေါ်တဲ့ တားမြစ်ဆေးဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့် အဲ့ဒီဇွန်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမှန်တကယ်မှာလည်း မက်သာဖီတမင်းဖြစ်နေတာကြောင့် Huff တစ်ယောက် ဘူမသိကိုးမသိနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁) လခွဲကျခံခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် (၁၉၉၇) ခုနှစ်၌ Atwater ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ခါးပတ်မပတ်ခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ကလေး (၂) ယောက်နဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲအရာရှိတွေကတော့ Atwater တို့ကို ချလံပဲဖြတ်ရမယ့်အစား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့အဆင့်အထိ အရေးယူခဲ့ပြီး တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အထိ အကျဥ်းထောင်ထဲမှာ ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Atwater အနေနဲ့ ထိုင်ခုံခါးပတ်မပတ်ခဲ့ခြင်းအတွက် အမြင့်ဆုံးဒဏ်ကြေးငွေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ (၅၀) ကို ပေးချေပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။
၃။ ဆေးလိပ်သောက်လို့ ထောင်ကျခဲ့သူ။
အသက် (၃၁) နှစ်အရွယ် Brandon ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်က လူထူထပ်တဲ့လမ်းထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခဲ့မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Brandon အနေနဲ့ ခံဝန်စာချုပ်ရေးထိုးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဒဏ်ငွေပေးဆောငတာမျိုး တစ်ခုခုနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်ပေမယ့် ထောင်ဒဏ် (၁) ပတ်ကျခံရန်အတွက်သာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Brandon အပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ (၆) ဦးက အခုလိုပဲ အများပြည်သူပိုင်နေရာတွေမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုကြောင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံထားရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
၄။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆပ်ပြာတုံးတွေနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ရသူနှစ်ယောက်။
ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆပ်ပြာတုံးတွေကို ကားပေါ်တင်ပြီး သယ်ဆောင်လာတဲ့ အသက် (၂၆) နှစ်အရွယ် Cruz နဲ့ အသက် (၃၀) အရွယ် Bernstein တို့နှစ်ဦးကို ရဲတွေက ကားရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာတော့ ကားထဲကနေ ကိုကင်းအနံ့တွေရရှိနေတာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ကားပေါ်မှာသယ်လာတဲ့ ဆပ်ပြာတုံးတွေကတစ်ဆင့် ကိုကင်းအနံ့ထွက်တာမဟုတ်ပေမယ့် အဖမ်းမခံရခင် မနက်ပိုင်းမှာ Bernstein က ကားထဲမှာ ကိုကင်းသောက်သုံးခဲ့သေးတာကြောင့် အခုလိုပဲ အနံ့ထွက်ပြီး ဆပ်ပြာတုံးတွေကိုပါ ကိုကင်းအဖြစ် အထင်လွဲမှားပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် (၂) ယောက်လုံး ထောင်ဒဏ် (၁) လချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး (၂) ယောက်ပေါင်း ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ (၇) သိန်းခွဲအထိ ပေးဆောင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် ဆပ်ပြာတုံးတွေကို စစ်ဆေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုကင်းတွေမဟုတ်တာကြောင့် ဒဏ်ငွေပြစ်ဒဏ်ကိုတော့ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၅။ လူကြားထဲဆဲဆိုခဲ့သဖြင့် ထောင်ချခံရသူ။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်က Wesley Force ဆိုတဲ့သူတစ်ဦးက လူကြားထဲမှာ ဆဲဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ Force ကို ခံဝန်တောင်မထိုးခိုင်းဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့် တရားရုံးတက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ထောင်ဒဏ် (၁၀) ရက်ကျခံဖို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်က မိခင်တစ်ဦးကလည်း သူ့ရဲ့ကလေးငယ်တွေရှေ့မှာ ဆဲရေးတိုင်းထွာမိခဲ့တာကြောင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
Joseph Stoiber ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မနက် (၂) နာရီဝန်းကျင်မှာ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အတွင်း လမ်းလျှောက်လာရင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၂) ယောက်ရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး ရဲတွေက သူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရှာဖွေဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Stoiber က ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ရဲတွေက သူ့အိပ်ကပ်ထဲပါလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို သံသယဝင်ခဲ့တာကြောင့် မြေကြီးပေါ်ဝမ်းလျားမှောက် ရှာဖွေစေခဲ့ရာမှ ပါးစောင်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ဆေးရွက်ကြီးတွေကို မြေကြီးပေါ်ထွေးချခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှုက Stoiber ကို ထောင်ချပစ်လို့ရပေမယ့် ဒေါ်လာ (၂၅၀) ဒဏ်ရိုက်ပြီး ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Stoiber နဲ့ပတ်သက်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၂) ယောက်ရဲ့ ရှာဖွေမှုပုံစံက မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
၇။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များကို ထောင်ချခဲ့မှု။
နယူးယော့ခ်စီးတီးက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကို ဆယ်စုနှစ် (၁) ခုကြာအောင် ပစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် ရိပ်စားမိလာပြီး ဒဏ်ကြေးမပေးဆောင်နိုင်ခြင်း၊ တရားရုံးမတက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကာလရှည်ကြာအောင် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို သတိထားမိလာပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မြို့တော်အာဏာပိုင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၀) အတွင်း စွပ်စွဲချက်များနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရတဲ့ လူပေါင်း (၂၂,၀၀၀) အတွက် ဒေါ်လာ (၁၅) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
၈။ ကျောင်းကားရှေ့မှာ မဖွယ်မရာကပြခဲ့မှု။
ဖလော်ရီဒါက အိမ်ခြေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ကလေးငယ်တွေအပြည့်ပါလာတဲ့ ကျောင်းကားတစ်စီးရှေ့မှာ မဖွယ်မရာကပြခဲ့တာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဒဏ်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ (၂၅၀) ပေးဆောင်ပြီး ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ကို ရှောင်လွှဲခဲ့ပါတယ်။
၉။ အသံအကျယ်ကြီးဖြင့် ဘုရားရှိခိုးမှု။
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးဟာ ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာမှာ အသံချဲ့စက်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကျယ်နှုန်းထက် ကျော်လွန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကြောင့် မကြာခဏ အဖမ်းခံရလေ့ရှိပြီး တစ်ကြိမ်အဖမ်းခံရတိုင်း (၂) ပတ်စီနဲ့ အကြိမ်ပေါင်း (၅၀) ကျော်အထိ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ဒီသင်းအုပ်ဆရာက ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာ မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ဒရမ် အသုံးပြုတာတွေကို မရပ်တန့်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကိုယ်နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို တခြားသူမသိအောင် ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ဆီကနေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ၊ ငွေကြေးတွေ ခိုးယူခြင်းမှ တားဆီးလိမ့်မယ့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၆)ချက်ကို...